Coronavirus Oo Ku Hanjabay Inuu Kala Qoqobayo Aduunka Iyo Qaylada Isaga Yeedhay Dacalada Dunida - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Coronavirus Oo Ku Hanjabay Inuu Kala Qoqobayo Aduunka Iyo Qaylada Isaga Yeedhay Dacalada Dunida
#Coronavirus Threatens to Separate World Wide
Tobbanka Dal ee Safka Hore kaga Jira Coronavirus.
> Maraykanka oo u qoondeeyay $8.3bn, dhibaatada Coronavirus
> Shirkaddo Waaweyn Oo Hawada Ka Baxay
> Iiraan Oo Qalab iyo Waxyaabaha layskaga Difaaco Jeermiska Ku Guulaysatay Sharci Cusubna La Soo saartay Coronavirus
> Hogaamiyaha Shiinaha, Xi Jinping Oo Joojiyay Booqashada Japan Coronavirus
> Jaamacaddaha Iskuulada iyo Kullamada oo la Joojiyay Dalal Badan
Washington(ANN)-Coronavirus, wuxuu ku hanjabay inuu kala qoqonayo Aduunka, wuxuu abuuray xaalad wer-wer iyo argagax ku abuurtay shucuubta dunida, isla markaana saamayn weyn ku yeelatay nolosha Aadamaha, Caafimaadka, dhaqaalaha, waxbarashada, wax-soo-saarka iyo isu socodka dunida.
Dalka araykanka, waxa uu waajahay xaalad cabsi weyn leh, taas oo ka dhalatay markii lagu arkay ku dhowaad 20 gobol inuu ku faafay cudurka sida weyn u saamayeeyay dunida ee Coronavirus.
Xaaladan waxa jira dad ganacsi ka dhex bilaabay si ay uga faa’idaystaan Coronavirus, mana jiro sharci xakamaynaya, dadku waxay ka ordayaan Coronavirus oo faafaya, waxay u ordayaan si ay naftooda iyo qoysaskooda uga badbaadiyaan dhibaatada kusoo fool-leh ee Caafimaad, Mareykanka wuxuu arkayaa baahi weyn oo ah inay wax kasta oo ku yimaada xidhtaan maaskarada wejiga ee Afka waxyabaha gacmaha la gashado iyo kuwa nadiifiyayaasha ah. sidaa waxa yidhi, Jack Arnest, oo 67 jir ah, isla markaana sheegay inuu dhammaadka todobbaadka oo dhan xaawilyay sidii uu waxyaabaha Maaskarada Afka N5 u heli lahaa, kadib markii uu ka shaacay qiimaha uu la arkay liiska eBay oo ku qoran sedex sanduuq $ 62. balse ugu danbayntii wuxuu sheegay inuu xaqiiqsaday inuu helayo seddex waji oo keliya, wuxuuna deg-deg ula hadlay eBay isagoo ka codsaday inay ka saaraan liiska qiimaha aan macquulka ahayn.
“Ma jiro hab sanduuq 20 maaskaro ah uu ku kici karo $ 400. Taasi waxay ahayd tusaale cad oo goyn kara. Qof ayaa runtii halkaas ka faa’iideysanaya. ”ayuu yidhi Arnest, oo ah maamulaha mashruuca howl-gabka ah iyo injineer ka ah shirkadda dhismaha ee Honolulu
Iibiyayaasha qaybaha saddexaad ee keydka guryaha waaweyn ee Amazon.com, Walmart iyo eBay waxay u muuqdaan inay tijaabinayaan waxa suuqa uu qaadi doono. warbaahinta bulshada ayay si weyn u buux dhaafiyeen cabashooyin. Gavin Newsom guddoomiyaha California, ayaa ka mid noqday dadka sida weyn arrimahan uga cawday, waxaanuu yidhi, “Si daran, @amazon? Qiimayaashani waa wax aan macquul ahayn.
Cudurka coronavirus ee ka dhashay Wuhan, Hubei, China, wuxuu ku hanjabayaa inuu carqaladeyn doono kanaalka ganacsiga ee dunida, kuwaas oo durba uu saamayn weyn ku yeeshay ganacsiga isu socodka iyo isku xidhnaanta dhaqaalaha aduunka,
Dhimashada, ayaa kor u kacdat Koonfurta Kuuriya, Talyaaniga iyo Iiraan, waxay horseedeen masuuliyiintu inay qaadaan tallaabo adag. waxayna Iran sharci kasoo saartay Coronavirus, isla markaana waxay ku guulaystay inay samayso qalab iyo dawooyin lagula dagaalamayo Coronavirus, sida ay todobaadkan shaacisay xukuumadda Iiraan.
“Shakhsiyaadkaasi waxay waajihi karaan ciqaabta dilka. Haddii kale, waxaa loogu bedeli karaa muddo dheer oo xabsi ah oo u dhexeeya shan illaa 20 sanno ah.” ayuu yidhi, Af-hayeenka garsoorka Iiraan, Gholam-Hossein Esmaili oo arrintaa sharaxaya.
Labada dal waaTalyaaniga iyo Iiraane, dhammaan iskuullada iyo jaamacadaha amar lagu siiyay in la xidho. sodpp kale Shirarka waaweyn, bandhigyada ganacsiga, munaasabadaha dhaqanka iyo tartamada cayaaraha ayaa laga joojiyay Yurub oo dhan.
Suuqyada Aasiya waxay hore u sheegeen goor hore khamiistii inay xidheen si ay u ilaaliyaan maalgashadayaasha Mareykanka, kuwaasoo riixay qiimaha saamiyada maalin ka hor horraantii toddobaadkan sida ay sheegayaan natiijooyinka asaasiga ah.
Shirkadaha duulimaadyada caalamiga ah ayaa joojiyay gebi ahaanba duullimaadyada adduunka iyo safarada dalxiiska si looga badbaado faafitaanka Coronavirus, dakhliga sanadlaha ah ee shirkaddaha duulimaadyada caalamiga ah ayaa ku waayay arrintan $ 63 bilyan illaa $ 113 bilyan oo doollar, sida ay sheegtay Khamiistii Haya’dda Caalamiga ah ee Duulista Hawada.
“Saamaynta maaliyadeed ee ay ku yeelanayso arrinta Coronavirus wershaddaha iyo diyaaradaha ayaa noqon doonta masiibo aan la malaynlarin“ ayuu yidhi Alexandre de Juniac, madax ka ah ururka Wershadaha.
Diyaaradda UK Flybe ayaa joojisay duulimaadyada iyo shaqadii kadib coronavirus uu sabab u noqday inay kacdo.
Shirkadda ugu weyn Britain ee duulimaadyada gudaha, Flybe, waxay ku dhawaaqday inay joojinayso dhammaan duulimaadyadeedii ka dib markii ay ku dhawaaqday inay kacday, maadaama cudurka faafa ee coronavirus ay ku dhacdo shirkadaha diyaaradaha ee adduunka oo dhan.
Duullimaadyadii oo dhan ayaa la joojiyay ganacsiguna Boqortooyada Midowday waxay joojisay ganacsigeedii si dhakhso leh, ”ayay tidhi diyaaradda oo ay ka shaqaynayeen dad lagu qiyaasay 2,000 oo qof.
Hogaamiyaha Shiinaha, Xi Jinping, ayaa Khamiista dib u dhigay booqasho aad loo filayay inuu ku tago Japan, taas oo uu noqon lahaa qofkii ugu horreeyay ee Hoggaamiyaha Xisbiga Shuuciga Shiinaha muddo tobbanaan sano gudahood ah booqda Japan.
India waxay xidhgay dugsiyada ilaa laba milyan oo carruur ah oo ku nool New Delhi.
Dhamaan iskuulada hoose ee caasimada India, New Delhi, waxaa la faray in la xidho khamiistii, kuwaas oo saamaynaya in kabadan labo milyan oo caruur ah, iyadoo masuuliyiintu ay raadinayeen in ay ka hortagaan tirada yar ee kiisaska wadanka in ay sabbabaan faafitaan weyn.
ku-xigeenka agaasimaha Delhi, Manish Sisodia, wuxuu Bartiisa twitter-ka ku sheegay in ficilkan loo qaaday “tallaabo taxaddar leh.”
Sida ku xusan amarka, dhammaan iskuullada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee fasalka shanaad ayaa la xidhi doonaa laga bilaabo Jimcaha illaa March 31. Magaalada ayaa leh in kabadan 2,700 oo iskuulo hoose iyo kuwa hoose-dhexe ah, sida lagu sheegay xogta dowladda ee dhowaan.
Tan iyo markii dunida ka bilaabmay inuu Coronavirus talaabooyin ficil ah oo lagu joojinayo faafitaankiisa, ayaa sababay xannibaadii ugu weynayd ee taariikhda aadanaha, iyadoo ilaa 700 milyan oo qof lagu amray inay gooni isu taagaan – xawaaraha caabuqyada cusub ee halkaas ka jira ayaa hoos u dhacay.
Hadda, kiisaska cusub iyo dhimashada la xidhiidha ee ka baxsan Shiinaha waxay ka badan yihiin kuwa dalka China gudihiisa ku jira, wuxuuna Coronavirus gaadhay in ku dhow 80 Dal, kuwaas oo marka laga reebo dalalka safka hore kaga jira Liiska ay ka mid yihiin kuwan:-
Austria: ayaa xaqiijisay 37 kiis oo coronavirus ah in lagu arkay, sida ay WHO, u gudbisay waxa kiisii u horreeyay lagu arkay 05 March.
Belgium: ayaa xaqiijisay Coronavirus inuu gaadhay inta u dhaxaysa 23 -50, waxayna 05 March, shaacisay 27 kiis oo cusub.
South Africa: ayaa ka mid noqotay dalalka shaaciyay coronavirus on 05 March, markii lagu arkay kiisii u horreeyay Nin 38-jir ah oo ka yimi dhanka Talyaaniga, waxayna ilaa hada tirada la hayaa gaadhay 9 qof.
Russia: 29 February, ayaa lagu arkay 4 Kiis oo ah kuwii u horeeyay sida ay baahisay Wakaaladda wararka RIA News. sidoo kale 31 January ayaa lagu arkay gobolada Zabaikalsky iyoTyumen, kadib markii uu booqday qof u dhashay China.
Greece: 31, ayaa lagu arkay, waxa kale 05 March la xaqiijiya 21 kiis oo meelo kala duwan lagu arkay.
India: waxay xaqiijisay 05 March, 30 kiis, sidoo kale 24 qof oo ay ku jiraan 21 dalxiisayaal Talyaani ah oo xidhiidh la sameeyay qof kale oo Talyaani ah oo laga helay Covid-19 iyo seddex Hindi oo la socday ayaa la go’doomay waxaana laga baadhi doonaa coronavirus.
Sidoo kale dalalka 66 dal oo kala ah.
Sweden, Poland, Hungary, Slovenia, Iraq, Canada, Norway, The Netherlands, Portugal, Czech Republic, Ireland, Malaysia, Oman, Liechtenstein, Chile, Argentina, Ukraine, Bahrain, Kuwait, Lebanon, Australia, Iceland, Qatar, Morocco, Latvia, Jordan, Senegal, Saudi Arabia, Tunisia, Andorra, Indonesia, Azerbaijan, Ecuador, Armenia, Luxembourg, Monaco, Mexico, Dominican Republic, Thailand, New Zealand, Belarus, Lithuania, Nigeria, San Marino, Estonia, Denmark, United Arab Emirates, Taiwan, North Macedonia, Georgia, Romania, Pakistan, Brazil, Croatia, Algeria, Afghanistan, Israel, Egypt, Vietnam, Finland, Sri Lanka, Cambodia, Nepal.
Warbixin: By Carraale M. Jaamac: Freelance Journalist And Human Rights Activist Based In Somaliland